Asaaska cudurka keena hargabka shimbiraha oo loogu talo galay dadka digaaga ku dhaqda magaalooyinka iyo deyrarkooda : Poultry : Agriculture : University of Minnesota Extension
Extension > Agriculture > Poultry > Avian influenza > Asaaska cudurka keena hargabka shimbiraha oo loogu talo galay dadka digaaga ku dhaqda magaalooyinka iyo deyrarkooda
Asaaska cudurka keena hargabka shimbiraha oo loogu talo galay dadka digaaga ku dhaqda magaalooyinka iyo deyrarkooda
Ilaa bishii Diisembar, 2014kii, Wasaaradda Beeraha ee Maraykanka (USDA), waxay diiwaan galisay xaalado la hubo oo cudurkan HPAI ah, waxana mas’uul ka ahaa nooca gaarka ah ee H5N2 oo laga helay digirinka, iyo digaaga kale ee guraha gadaashooda lagu dhaqdo ee gobolada Washington, Oregon, California, Idaho. Waxa kale oo laga helay shimbiraha ganacsiga gala ee gobolada California, Minnesota, Missouri, iyo Arkansas (Faahfaahin halkan ka eeg). Khatarta dadka uga imanaysaa aad bay u yar tahay, mana jirto welwel dhinaca cuntada ah maxaa yeelay shimbiraha uu cudurku ku dhacaa suuqa ma soo gaaraan. Khatarta in caabuq dhasho waxay ku kooban tahay dadka tooska ula tacaala dhimbiraha uu xanuunku ku dhacay oo kaliya. Xasuusin ahaan, shimbiraha iyo ukumaha waa in si wanaagsan loola tacaalaa, laguna kariyaa heerkul gaaraya 165-degree Fahrenheit. Ha cunin shimbiro u muuqda inay jiran yihiin ama sababo aan la garaneynin u dhintay. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan badbaadada cuntada).
Wixii aad sameyn lahayd haddii aad ka shakido in shimbirahaagu ay qabaan hargabka shimbiraha ee aadka u daran
Tallaabooyin la xiriira bayosekuuritiga si aad shimbirahaaga u ilaalisid
Si dadka shimbiraha dhaqda looga caawiyo in shimbirahoodu ay ahaadaan kuwo caafimaad qaba, iyada oo cudurka laga hortagayo, bayosekuuritigu waa lagama maarmaan! Cudurka Hargabka Shimbiraha ee aadka u daran (HPAI) waxa uu ka yimaaddaa shimbiraha biyaha ag jooga sida boolo-boollada iyo ceelaabada oo gobolka Minnesota yimaadda. Markii digaagaaga uu cudurka ku dhaco, waxay u gudbin karaan shimbiro cusub. Markaa hadda waa xiligii ugu wanaagsanaa ee aad dib u eegi lahayd hanaanka bayosekuuritiga. Wasaaradda Beeraha ee Maraykanka (USDA) ayaa talooyinkan bixinaysa si looga hortago in cudurka Hargabka Shimbiraha looga ilaaliyo digaagaaga.
Ka fogow (Digaagaaga ka fogee meelaha cudurku ka imanayo). Tusaale:
Xaddid duurjoogta iyo shimbiraha aan la dhaqan ee shimbirahaaga u imanaya, adiga oo hoy iyo xeyn-daab u isticmaalaya meelaha furan. Isticmaal maro celisa shimbiraha duurjoogta ah, taas oo aan shimbirahaaga u diideynin inay dibadda arkaan.
Dadka shimbiraha xanaaneynayaa waa in aanay xiriir la sameynin digaag ama shimbiro kale ka hor inta ayna shimbirahooda u tagin. Xaddid dadka xeradaada soo booqanaya haddii dadkaasi ay iyaguna shimbiro leeyihiin.
Kala saar noocyada digaagga iyo waliba kuwa kala da’da duwan, maaddaama qaadista cururka ay ku kala duwan yihiin.
Eeg sida xeradaadu u sameysan tahay. Maxaad sameyn kartaa si aad uga hortagto in shimbirahaagu ay xiriir la sameeyaan shimbiro kale, kuwaas oo keeni kara cudurka HPAI?
Nadaafadda (Nadiifi oo jeermiska ka dil). Tusaale:
Nadiifi qalabka shimbiraha lagu quudiyo iyo kuwa biyaha lagu siiyo, kana fogee shimbiraha duurjoogta ah. Nadiifi waxa ka daatay cuntadii aad ku quudisay.
Bed-beddel sida aan u quudisid, waa haddii shimbiraha duurjoogta ahi ay mar walba kuu imanayaan.
Isticmaal dhar joogta ah ama kuwo nadiif ah iyo kabo marka aad digaagga ka shaqeynaysid.
Nadiifi ka dibna jeermiska ka dil qalabka aad xerada shimbiraha kaga shaqeysay sida baddeelaha iyo fargeetada beerta.
Mar walba nadiifi oo jeermiska ka dil meesha shimbiraha lagu xereeyo iyo qalabkaba si loo xaddido in shimbiruhu ay taabtaan xaarkooda.
Qiimee hawshaada. Ma sidii aad dooneysaybaa mise wax baad ka beddelaysaa?
Cudurka gurigaaga ha keenin. Tusaale:
Shimbiro cusub oo aad keentay ama shimbirahaagii oo aad ka soo celaysay meelaha badhigga shimbiraha. Meel gaar ah ku hay ugu yaraan 30 maalmood.
Saxaaradaha wasakhda ah iyo qalabka kale ee aad ku soo celinayso xeradaada adiga oo aan nadiifin oo aan jeermiska ka dilin. Kuwan waxaa ka mid ah taayarada baabuurka iyo qalabka wax lagu jiido.
Si qoto dheer u eeg. Meesha aad kaarantiinka ugu talo gashay, runtii ma ka soocan tahay, si shimbirahaagu kuugu badbaadaan? Xagee ayaad saxaaradaha ku nadiifisay? Biyihii nadiifintaas ka baxay shimbirahaaga ma u tagi karaan?
Dariskaaga cudur ha ka keenin
Ha la wadaagin ama dib ha u isticmaalin alaabta sida kortoonka ukumaha ee dariskaaga ama dadka kale ee shimbiraha leh, waxaa laga yaabaa inaad cudur soo amaahatid (deynsatid).
Ma haysataa wixii aad kaga fogaan lahayd saaxiibadaada iyo dariskaaga? Hadda waa markii aad keensan lahayd qalabka iyo waxyaabaha kale ee aad u baahan tahay si arrintaasi ay suuro gal u noqoto.
Faahfaahin dheeraad ah, faldan booqo website-yadan:
University of Minnnesota Extension